एउटा रह’स्यमय घर ! यस्तो मिठो प्रेम ,३२ सन्तान, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on एउटा रह’स्यमय घर ! यस्तो मिठो प्रेम ,३२ सन्तान, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
चारैतिर जङ्गल अनि बिचमा छ एउटा सुनसान घर । चितवन मुङ्लिङ सडक खण्डमा यात्रा गर्दै गर्दा यो घर निकै नै रहस्यमय देखिन्छ । बिचमा त्रिशुलि खोला अनि पारि भिरमा एकान्तमा एउटा मात्रै घर । यो घर कस्ले बनायो कहिले बनायो र यो घरमा को बस्छ होला ? यस्तै अनेकौ प्रश्नहरु यात्रा गर्दैगर्दा मनभरि खेल्ने गर्छन् ।
सो घरमा दुईजना बृद्ध बुवा आमा बस्दारहेछन् । इस्लाम धर्म आस्था राख्ने उक्त जोडि एकदमै खुसिसग उक्त घरमा बस्दै आएको हामी उनिहरुको हाउभाउ र बोलिबाट प्रष्ट हुन्छौ । बुवाका तिनजना श्रीमती र बत्तिस सन्तान भए । तिनजना श्रिमतिलाई बुवाले अलगअलग राखे र सौतासौताबिच भेटनै नहुने गरप व्यवस्था गरे ।
उक्त जोडि यस्तो ठाउमा बसिरहेका छन् जो कोहि पनि जादैनन् र त्यो घर पुग्दै पुग्दैनन् तर पनि उक्त जोडि एकदमै सन्तुष्ट र सुखि छन् । उमेरको हिसाबमा ८६ बर्ष पुगे पनि बुवाको अझै पनि जोस जागर र बोलिमा उतिकै उर्जा र दह्रोखरो नै छ ।
हेर्नुहोस् भिडियो यहाँबाटः